JINGHPAW KASA: မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဘိန်းကုန်သည် ပန်ချာဘီ ရူမီ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မင်းရပ်မတွင် ရွှေတူးဖော်ရေး ပစ္စည်များကို ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်ကာ စီးပွားရှာ ရောင်းချနေသော ပန်ချာဘီ ရူမီ ဆိုသူသည် ဆိုင်ခန်းကို ဘမ်းပြကာ နောက်ကွယ်တွင် ဘိန်းဖြူ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချကာ ကြီးပွားချမ်းသာနေသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကြားသိရပါသည်။ ကေအိုအိုအစိုးရမှ ပန်ချားဘီ ရူမီ ၏လုပ်ရပ်ကို သိရှိသောကြောင့် မူယစ်ဆေးဝါး တားဆီးပိတ်ပင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်အရ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်အေ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) လက်အောက် တပ်ရင်း (၁၁) မှ လူလွတ်က သတိပေးစားသွားပေးခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ကေအိုင်အို အစိုးရမှ သတိပေးစာပေးရန် လွှတ်လိုက်သော လူငယ်ကို သူခိုးဟု စွတ်စွဲကာ လူအများနှင့် ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
kill them all panchapyis.Thye eat kachin's rice, but they bite kachin hands.
Atawk kau ra ai.
Panchapyis ngu nmai tsun ai. Anhte myu hpe hkra yang mung anhte nra ai zawn shanhte mung nra na re. Dai re majaw kani dut,No.4 dut ai ni kadai rai tim mung ahhkyak la na hku di ga. Jinghpaw,sam,Panchapyis,myen kadai hpe mung dai hte seng na hkyak hkyak ahhkyak la ra ai
ဒီ ကလား တော့နာချင်ပြီနဲ့ သူတယ် KIA ဆိုတာ ဗမာ စစ်တပ် နဲ့ မတူ ဘူးကွ
Jaw dik ai lo,Kar-ni dut shabra ai myen balik ni du hkra sharin shaga kau ra ai le i...
သိပါတယ်KIA က မိုက်ရိုင်တယ်ဆိုတာကချင်ဒေသရောက်ဖူးရင်သိမှားပါ
Ning re shang lawt magam bungli gunhpai nhtawm hpyen wa lata de lam amyu myu hku du mat sai magam gun ni hpe lit la nhtawm hkamshaw la ai lam,asuya hte tsun bawng ban hkat ai lam ni hta ahkaw ahkang lu shagu tsun shaga ra na re.Salang kaba La Nan shiga dap ni san ai hta " hpyen bawng kalai hkat na matu yaw shada ai i?" nga san shaloi salang kaba La nan gaw dai hku gaw nre nga bai htai wa yu ai,Ndai gaw asuya ngu ai mind set nre lam dang dawng nga ai,myit masa kalai shai ga.Moi Du kahtawng na Nmai Naw Ji hpe mung Du Kaba La Sang Awng wa shangun ai majaw myiwa Dr. nta sa ai kaw nta masha ni hpyeda shaga dat ai majaw gap hkat nna si hkrum mat sai re.shing rai yang nta madu ni hpe ari jaw ai lam ni mai kalaw mat wa ai re,hpa ari jaw ai lam nkalaw ai hpe yu yang K.I.O ni ti nang masha hpe manu nshadan ai lam, lit nla ai lam dan dawng nga ai.Myit masa kalai shai ga.Du kaba salang kaba ni e.asak ngu ai gaw K.K jaw ai re majaw gaw majoi kabai da nmai ai.Ya ndai kala hpe mung sharin shaga ai lam ni gaw nga ra na re.anhte myusha hpe hkra jang yawng machyi ai ngu hpe shanglawt asuya nan woi kalaw wa ra sai prat re sai.Jews masha ni hpe yu la na sharin la ga lo....goi ye..
Oh com'on people.......tell the truth. Don't goes to RUMORS.Tell the truth to the people. There were thousand of people who saw the truth. I heard they were about to ask MONEY.which they will use for WAR!
punjabi, ngu nna gaw ntsun na hpe myit hkrum lawm sai,raitim ndai punjabi wa gaw lai wa sai,taing mu major general OHN MYINTaaten hta mung,KANI HPRAW manuk mana rim hkrum yu sai wa rai nga ai.DAI ten hta, ks.sen 5000,OHN MYINT hpe, mayun kum hpa jaw dat ai shaloi,lu rim tawn da ai n0,4 ni gaw sap pya shadung she bai rai mat ai da.ANHTE W.P. RAM MA ni hpe jahten, shaza ai,kani hpraw dut ai DAJU KABA nan rai nga ai majaw,maga mi hku bai sawn yu yang,MYEN HPYEN ASUYAaANHTE MYU SHA ni hpe kani mjan hku nna shamit gasat ai lam hta MYEN ASUYA ni jailang ai,KANI DUKABA ROMI hku nna mung mu mada lu mai nga ai.Lawan dik ai hku ahkyak la shazim kau ra sai.
KIA အကြောင်းသိရင်ပြီးတာပဲ.. ကချင်ပြည်ရောက်လို့ ခံလိုက်ရပြီပေါ့..
ဘိန်းခင်းပိုင်ရှင် ရူမီ ... ဆက်လက်စုံစမ်းပါ.. အခင်းပိုင်တာ သူတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးကွ..
i know Romy foralong time,he is notadrug dealer.
the news is the fake news.
ဒါဆို KIA ယုတ်မာတာ ဝန်ခံပီပေါ့နော်
သူများ ချမ်းသားတာကိုမနာလိုဖြစ်နေတာလား။ ဒါဆိုရင်တော့သိပ်အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓာတ်ဘဲဗျာ။
KIA မိသားစုဝင်းများခင်ဗျာ သူတစ်ပါးရှိက ဆတ်ကြေးကောက်အချောင်ရတယ်ပိုက်ဆံနဲ့ မကြီးပွှားပါချင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်လက်မခံပါဘူး။အောင်မြင်ကြီးပွှားရင်လဲခဏတာပါ။ဒါကြောင်မို့ လဲသားသမီးတွေဘိန်းစားဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဒါဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တာပါ။
It is acommon sense,there arealot of business men who are doing and selling low quality chinese machines and tools,but no other business men have sky rocketing success like Mr,ROMY WITHIN AFEW YEARS TIME.So just think about it.
Du Wa said...
အဲဒီ ပန်ချာ နာမည်ကြီးတာ ကြာလှပြီ။ ရှင်းလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာမှ သတိတွေ ပေးနေစရာ မလိုဘူး။ ရဲတွေက အကာအကွယ်ပေးထားလို့ လုပ်ရဲ နေတာပါ။
အဲဒီမှာ လာဟောင်နေတဲ့ စသုံးလုံးကောင်တွေ ရူမီ မိသားစု တွေကို အကာအကွယ် ပေးထားတာ... ဝေစားမျှစားကောင်တွေ... အားလုံးရှင်းပစ်ရမယ်...
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ တခါ ဘိန်းဖြူ ကားအစီးလိုက် ဗလ မင်းထင်တံတားမှာ ဖမ်းမိသေးတယ်... တပတ်တောင် မကြာဘူး ဆိုင်ခန်း ပြန်ဖွင့်နေတယ်.... နောက်ပြန်ကြားတာက ဂျုံမှုန့် ကိုမှားဖမ်းတာပါ တဲ့လေ... ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်က ဂျုံကုန်သည် ဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။ မြန်မာ့ရဲတွေကလဲ မှားတတ်လိုက်တာ လွန်ရော....
မင်းတို့ အောက် ပိုင်း မှာ မဟုတ် တော့ပြော ကျပေါ့ကွာတနေ့ ကျရင် မင်းတို့ ဆီရောက် လာ မှာပါအဲဒီအချိန်ကျရင်စမ်း ကြည့်ပေါ့ခုတော့ကချင်ပြည်ပျက်သနာ ကချင် ဖြစ်တဲ့ kia ဘဲတာဝန်ယူလိုက် တော့ မယ် စောင့်ကြည့်ပေါ့ romyရယ် ရဲတွေအား လုံး romy ရဲ့ အိမ်မှာသေသေချာချာကင်းစောင့် ထား ကြ ပါသတိပေးလိုက်တယ်နော
KIO..,KIA.., hte litang ai du ni..,Jinghpaw Wunpawng Myusha ni..,Myit kata kaw.., Bawnu kaw .., Kyi hkum rawng mu lu yaw....,
ya dai SHUPI.., ngu ai wa hpe.., N-ta ting sa shamyit kau ra ai lu yaw.. Shawng lam majan pa hta Majan gap ai hta graw tsang ra ai WA re...,
ဘာလဲ ဒါကချင်ဉပဒေလား၊ဒါဆို ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဘိန်းရောင်းစားနေတဲ့ကချင်တွေကော အားလုံးရှင်းပြစ်ရမှားလား၊။ ဒါဆိုကချင်လူမျိုးကုန်တော့မှားဘဲ။
ဒါဆိုမြန်မာပြည်အနံ KIA မိသားစုဆွေမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ နန်းတော်လိုအိမ်ကြီးတွေအများကြီးဘဲ။မတရားဆတ်ကြေးကောက်၊ဂိတ်တွေမှားသေ နတ်ပြ ချိန်ခြောက်ပီ လုထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ဆောက်ထားတာလေ။သူတို့သားသမီးဆွေမျိုးတွေလဲရန်ကုန်၊မန္တလေးမှား ဇိမ်းခံနေနေ ကြတာစစ်လိုက်ရင်အကုန်ပေါမှားပါ။ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ အခုလိုKIA ထဲဝင်ပီအတင်းအကျပ်တောင်းပီချမ်းသားနေ ကြတာပါ။အဲတာလားကချင်နိူင်ငံလုပ်မဲ့စိတ်ဓါတ်လား
ကချင်နိူင်ငံလုပ်ချင်တဲ့ ကချင်သတင်းဌာနရဲ သတင်းကိုအမှန်အတိုင်းရေးပါလား။စာမတတ်တဲ့ ကချင်တွေကိုဘဲလိမ်လိုရမယ်နော်။ ဆတ်ကြေးလားတောင်လို့မိတာကိုအမှန်တိုင်းမရေးရဲဘူးလား။အခုကတည်းကလိမ်ညာနေရင်ဘယ်ကောင်းမှားလဲ။
Jinghpaw rai n na myen hku ka ai, Wunpawng mung dan shang lawt lu hkra jawm shakut na malai ting gyen myit hte myenamayam tai mayu ai Myen n-gyi ni, mungdan shang lawt lu ai shani nanhte myi man da shara pyi n nga na yaw!!
လီးပဲကွာ... မင်းတို့က တိုက်လိုက်... ဗုံးခွဲလိုက်နဲ့ ငါတို့ပြည်သူတွေတော့ မဆိုင်ဘဲဒုက္ခရောက်ဦးမှာပဲ.. မင်းတို့ချင်းမကျေနပ်ရင် အချင်းချင်းနပမ်းလုံးကြကွာ.. မဆိုင်တာတွေတော့လျှောက်မလုပ်သင့်ပါဘူး...လီးပဲကွာ..
lee bae kwar ,min toe twe kachin mar nae ,kachin pi ka yae tauk pi kachin koe sae tae kg twe,respect taw shi tint tae....ta din media soe tar lae ti cha phoe loe tae that tayataukatar nae pyaw ma tarakg sone par....no 4lote tae soe tar man yin taw taydan paw byar....ha ha .....
life is simple make ur choice
so I can feel ur mind
I love kachin people
Kachin Independence Army Chief of Staff Gunhtang Gum shwang said that "if u mess with Kachin people , we will hunt u down.... "
Rume(ရုမီ) take care for that word.. because it is important and it havealot of meaning .... KIA is now fighting with Government's army because they mess with kachin people's right and freedom ....... now u mess with kachin people's live and future by selling Drugs ....... IF i am one of KIA , i am going to hunt u down......
More than that i think they are going to do something to you ( Rume )
သတ္တိရှိရင် အဖြစ်မှန်ကိုအမှန်အတိုင်ရေးရဲရမှားပေါ့။လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုခိုးကြောင်ခိုး ဝှက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်နေတာ သတ္တိရှိတာလား။
KIA ရေ ခင်ဗျာတို့လဲမိသားစုနဲ့ပါ ဝဋ်ဆိုတာလည်တတ်တယ်နော်။အဲဒါကတော့ဘုရားခတ်တဲ့ဒဏ်ဘဲ
ပန်ချာအားလုံးကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့ဗျာ။ရိုမီမှာအမှန်တကယ်အပြစ် ရှိရင် သူ့ကိုဥပဒေကအပြစ်ပေးလိမ့်မယ်။တစ်မျိူးလုံးကိုပြောစရာမလိုပါဘူး။ဆစ်ခ်(ပန်ချာပီ)လူမျိုးအာလုံးမ ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာကချ မျိုးတစ်ယောက်ဘိန်းဖြူဝယ် ရောင်းလုပ် ရင် ဘာလဲကချင် လူမျိူးအားလုံးကိုအပြစ်ပေးသင့်လား?
KIA ယုတ်မာတာအဲတာထက်ပိုဆိုးတာပေါ။ ကချင်အချင်းချင်းတောင်အလွှတ်မပေးဘူး။
မှော်တွေမှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
သူအများစုကတော့ kia အရာရှိကတော်တွေပါ
အမှန်အတိုင်းပြောတာပါ မဆဲကြပါနဲ့ကိုယ်တွေ့ ပါ
မှော်မပြောနဲ့ ကချင်အများစုနေထိုင်တဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှားတောင်ကချင်၁၀၀မှာ၉၀က ဘိန်းအရောင်းဝယ်လုပ်နေကြတာ။အားလုံးသိပါတယ်။သနားမနေပါနဲ့တော့ အားလုံးကိုဖမ်းလိုက်တော့ဗျာ။
d law said...
Tsi kaja nan dut ai wa hpe nan tsan-pya hku nna shang lawt tara hte hkrak madun lu na ahkaw ahkang pru sai ga re nga ai.Moi gaw Kar-ni shamyit masing hpe shang lawt ni nkalaw byin ai.Ya she tara shaja let kalaw byin wa ai majaw moi ten gawng kya ai ni nga na sai.Ya gaw ja ja rai ra sai. shing jang she Tsa-ya-hpa ni hte rau pawng di kar-ni nmai dut sha na matu byin wa na ra ai.Moi pyi anhte myusha shada shit di or nju hkat di sat kau hkrup ai ni law law rai sai re,Dai ni kaja wa mara lu ai wa hpe gaw hkrak ahkyak la ya yang kaja na re.K.I.O Tax hta na lit nan nga ai re.jinghpaw w/p lamu Ga kaw nga sai kadai mung Tax gaw bang ra chyalu re.K.I.O kaw bang ra na re.
Moi hpakant kaw simsa lam naw la nga ai ten hta myiwa lauban wa kaw K.I.O Tax sa hta yang mala la matsa dat ai hpang bat myi nga yang dai myiwa lauban wa mungkan Ga kaw na lupwa kawng de htawt mat wa sai re hpe ndai kala dum ra ai gaw re nga ai.
All KIA are one way and they don't have brain to think .
I don't think Rume mess with you all , you all have don't brain and send child to get money from him . Do you all think he open foundation to donate KIA ?? I am close friend of him , I am also from KIA army , but
I think you are also machine business man , you may jealousing of his success and his business ideas , his
Whatever Rume do .is that drug or business .it doesn't matter with KIA .the government will Handel it .we don't need to fight in comments .n we also don't have any right to say anything about Rume .now why KIA is putting Rume into the case of fighting kiA and police .is that the paper of asking for money ?Everyone ..let me tell u one thing .what about if u were in Rume place .if u guys have heart .u will understand .
Kill all fucking chinese, indian, pajabi,, burmese, they came to our kachin land to suck our resources and trick and cheat the kachin people.. Fuck you all Rumi supporter..
Let me be very clear, Chinese people fuck kachin women, Panjabi fuck kachin women, Burmese people fuck kachin women.Burmese soldiers rape kachin women..
what are Kachin man doing? musterbating? No way, Kill all those fucking foreigners.. Chinese go back to your country, Indians go back to your country, burmese go back to your lower part of Burma..
you are all alike.. why do you want to stay in Myitkyina? it's not your land. Ok, you have money somehow, you bought the land. but it not for you to take and exploit by doing dirty business or any business. In fact you have no right to stay in any part of kachin state. Fuck you all. Burmse, chinese, indian, panjabi you are protected by the fucking burmese government. you have the luxury of evil spirit. you don't care any thing about the kachin people. just go back..
Wow someone calling Romi Hero.. what applause!!
Why don't you call your father or mother "ahero" instead of Romi?
May be romi is your fucking your mother...or maybe your sister if you have one.. that's why you call him Hero..
အဲတာဆိုနိူင်ငံတကာမှားနေထိုင်ကြတဲ့ ဘာသာရေအမည်ခံ၊ဒုက္ခသည်အမည်ခံ ကချင်အမျုါ်းတွေကိုကောမောင်းထုတ်ရမှားလား
do you guys, indians, pajabi, chinese, fucking burmese consider yourself refugees in Kachin state? Learn first the definition of REfugee defined by UN convention in 1951.
you guys are simply opportunists. not refugees...
Burmese government have been persecuting the kacihn people for so many years until now.
who really are refugee? did you run away from your country of origin, be it china, india, lower burma due to fear of persecution.
you are here in Myitkyina or any part of kachin state protection under the cruel burmese government to do business by cheating innocent uneducated kachin people.
so that the burmese goverment do not need to do business by themself. they hold guns and give protection to you guys, chinese, indians, burmese. in return you guys, gave bribe to the government so you guys get rich and the fucking government get rich...
so enough is enough... don't try to even defend yourself. fuck off.
ကချင်ဆိုတာ အရင်ကနတ်ကိုယ်ကွယ်တဲ့လူရိုင်းတွေပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေရောက်လားမှ ငွေနဲ့ခရစ်ယန်ဇတ်သွင်းလိုက်လို့ မသိမသားယင်ကျေးလားတာပါ။အဲတာနှစ်၁၅၀ တောင် မရှိသေးပါဘူး။ အခုလဲလူးရိုင်စိတ်ရှိနေလို့ဒီလိုလုပ်နေတာပေါ့။ကချင်နဲနဲစု မိပီဆိုရင် အလကားနေရင်လမ်းပေါ်မှားသွားလာနေသူတွေကို ရန်ရှာပီရိုက်နေကြတာ။ အဲတာလူးရိုင်စိတ်ရှိနေလို့ပေါ့။
အဲတာပြောတာပေါ့ ကချင်တွေဘယ်လောက်အသိညဏ်ခေါင်ပါးသလဲဆိုတာဖော်ပြနေတာဘဲ။ ကချင်နားတစ်ဖက်ပေါက်ဆိုတာသိကြပီမလား။
First,the drug dealer Rome shall be given death sentence.
Second, the supporters to all dealer shall be given punished.
Third, the killers to the civilians in the kachin state.
finally, to the SYHpa of army and polics.
သူးများချမ်းသားနေတာကိုဘာမနာလိုဖြစ်နေတာလဲ။မင်းတို့ကချင်တွေလဲ မတရားဆတ်ကြေးကောက်၊ဂိတ်တွေမှားသေနတ်ပြချိန်ခြောက်ပီ ရတဲ့ငွေနဲ့ချမ်းသားနေတာဘဲလေ။အဲသလိုလုပ် စားနေလို့ကချင်ချမ်းသာရင်ခဏဘာဘဲ။သင်းအုပ်ဆရာတွေကကောအဲသလိုမလုပ်ရဘူးလို့မပြောကြဘူးလား။
တကယ်လို့ငွေလာတောင်းတာဆိုရင်မပေးလိုက်တဲ့အတွက် ရိုမီခင်ဗျားမှားသွားတယ်။ ဟူစိန်
ရိုင်းတယ်လို့ပြောရင် ဘာလို့လူရိုင်းတွေနေတဲ့မြို့မှာ နေလဲ.. ထွက်သွားပါလား.. အရိုက်ခံရတာမင်းညံ့လို့ပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား
ကချင်တွေအကြောင်း မကောင်းကြောင်းဘဲရေးမနေကြပါနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုလည်းပြန်ကြည့် သန့်ရှင်းသလားလို့..၁၇ နှစ်လုံးလုံး ၀ါးတားဂိတ်တွေမြောက်များစွာလုပ်ပြီးကောက်စားနေတာ..ပြည်သူအတွက်လား..ဂုတ်သွေးစုပ်နေ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့အပေါင်းအပါတွေအတွက်ပဲ လုပ်နေတော့ မချမ်းသာပဲနေမလား၊ တခိုးကအိမ်ရှင်ကို ဟစ်မနေကြနဲ့..သရေပေါ်နား သရေကပ်စားလူမျိုးတွေဆိုတာ မင်းတို့မဖြစ်နေဖို့လိုတယ်...သတိထားကြ.. ဗမာကောင်းစားနေရင် ငါကဗမာဟေ့လို့အော်မယ်..ကချင်တွေကောင်းစားရင် ငါက ကချင်မျိူးနည်းနည်းစပ်တယ်ပြောအုံးမှာ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလူမျိုးမှန်းသောချာမသိတဲ့ လူမျိုးမစစ်တဲ့၊ အပေါ်ဖား အောက်ဖိ သမားတွေ မဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ကချင်တွေကို မပုပ်ခတ်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင် အပြောအဆိုယဉ်ကျေးပါ..ကချင်တွေကိုကျေးဇူးဆပ်ပါ.. ဘာကြောင့်လဲ ကချင်ပြည်မှာ အိမ်နဲ့ယာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခွင့်ရ၊ စီးပွါးရှာလုပ်စားလို့ ခွင့်ပြုထားလို့ပါ.. ယဉ်ကျေးရှိမှုနဲ့ကျေးဇူးသိတတ်ရင် နောင်လည်းနေခွင့်ရမှာပါ..စိတ်မပူကြပါနဲ့..ဒါပေမယ့် အိမ်ရှင်ကို အိမ်ငှါးက ကလန်ကဆန်လုပ်မနေဖို့တော့ သတိပေးချင်တယ်..ငါလည်းကချင်တစ်ယောက်ပါပဲ...
ပန်ချာ မဟုတ်သူ said...
Jinghpaw Kasa Blog အောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့ရပြီ။
Anhte A Awng Padang YEHOWA KARAI KASANG......
You said that "if i am Rume How will i feel?"
here is the answer : I amaKachin.... but if i have to think like Pancharpi ... even i sell drug to kachin people ....i doesn't matter for me because kachin's future is not my, Pancharpi' future...... and Goverment also would like to destroy active kachin youth ..... it means we, me and Government are on the same boat.........i want the money....they want to destroy Kachin youth.... that the deal... Money is good for me...
you know what happened in 2008 at Balamin Hting bridge.... when i was arrested by စစစ စသုံးလုံး for distributions drug all around the Kachin State... i give them 2000 laks ...and they let pass wiht opiums 60kg......
How do i feel when KIA askalot of Tax for what i have done and warm me not to sell Drug anymore which make me really rich?
.... i was really annoy ... Because even the gorverment support me why not you ,KIA?..... I think like that If i am Rume.........
But Here is the answer .. KIA are Kachin People... they care for Kachin people , Kachin youth and Kachin future.......... But you ,Rume and Government are not Kachin people and you don't care for us too... That why KIA can't support you and allow u to sell Drug in Kachin Sate...... That the answer If i am from KIO
sanli bahkyam said...
We are not Jealous ...son......
when Mack Zubecker ,Founder of Facebook got 10 Billions dollar who is just 28 years old.....
We are not jealous when FMI going Build2Hotel ,.. 1 five star Hotel , the biggest super market and Myanmar Trade Center like similar as world trade center in downtown area at Yangon...
we are not jealous .......
he not rich as Mack Zubecker...
His Company is good enough to buildafive star hotel in Downtown area at Yangon why should we have to jealous about Rume?......he is nothing when we compare with them....
But we talkalot about him because he sell drug to Kachin people..it will destroy my friends future... my relative future , my family future my future and our Kachin generation ....
that why we blamealot on him and want him to be punished .....don't just say we are jealous by comparing with you dirty mind..... when u don't know anything yet..
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်စကားစစ်ထိုးမနေပါနဲ့.. ရှေ့ဆက်ပြီးကောင်းအောင် ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားပါ
ပန်ချာချစ် သူ said...
ရိုမီ သတိထား ဖို့ အချိန်သည် ကျရောက် လို့လာဘားပီ လေး မုတ်ဆိတ် ရိတ်ပြီး ပုံသာ ပြောင်း လိုက်တော့လို့
ပန်ချာပီက ဘိန်းရောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်..မြစ်ကြီးနားမှာနာမည်ကြီးပဲလေ..ဖိုးဆိုပီးဖမ်းထားတာ ဟင်းချိုမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့
KIA ကလည်း မိုးညှင်း မြစ်ကြီးနား ကချင်ပြည်နယ်တခုလုံးမှာ ဆက်ကြေးတွေလိုက်ကောက်နေတာဟာ ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်နေတာပဲ..မင်းတို့သက်ဆိုးရှည်ဖို့ဆိုရင် မင်းတို့ကချင်တွေဆီမှာပဲ လိုက်ကောက်ပါလား...အစိုးရကိုလည်းကြောက်ရ.မင်းတို့ကိုလည်းကြောက်ရနဲ့...
KIA ရေ..မင်းတို့ အင်းတော်ကြီးဘက်မှာ စုဆောင်းရေးဆွဲတာ ခဏခဏကြားနေ သိနေ၇တယ်..ဆက်ကြေးကောက်တာလည်း တပြည်လုံးအသိပဲ..မင်းတို့ က ကချင်ပြည်နယ်ကာကွယ်ေ၇းးလား.ကချင်လူထုကာကွယ်ရေးလား..
မင်းတို့လုပ်ရပ်ကိုသဘောကျရင် လူငယ်တွေသူ့ဘာသာသူ အလိုအလျောက် မင်းတို့ထဲ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်..မင်းတို့ လုပ်ရပ်ကိုမကြိုက်ရင်တော့ ဘယ်သူမှ မ၀င်ချင်ဘူး..အဲ့ဒါသဘောပေါက်ထား..အတင်းအဓမ္မ မစုဆောင်းပါနဲ့...ကချင်လူငယ်တွေ အများစုက မင်းတို့ရဲ့ အတင်းစစ်မှုထမ်းစနစ်ကိုကြောက်လို့ ၇န်ကုန်ဘက်ကို တော်တော်များများပြေးကုန်ကြတာ မင်းတို့သိမှာပါ..မင်းတို့ ကချင်လူငယ်တွေတောင် မင်းတို့ KIA ထဲမ၀င်ချင်တာ.တခြား လူမျိုးတွေကို မင်းတို့ထဲ ဆွဲမသွင်းပါနဲ့...
We kachin people have been oppressed firstly politically, secondly economically, thirdly socially and the worst of all psychologically by the fucking Burmese military government.
Kachin people are very intelligent, skilled and hard working people. Now all have become drug addicts and mentally depressed due to the systematic elimination of the fucking Burmese military government. you don't even deserved to be called government. You areadictator.
When the European missionaries came to Kachin state to evangelize, the stupid fucking Burmese kings ignored us by saying to the missionaries. Quote " It is justawaste to teach the Kachin people, you should rather teach my dog first."
That was the first public insult of Burmese towards kachin people.
during those time Kachin land is not even considered part of the country map.
Until now you are still insulting the Kachin people instead of apologizing and thanking Kachin people. I told you already " Enough is Enough"
if you say another word of insult to kachin people again, we would not even let your body buried in the Kachin ground.
ရိုမီ ဘိန်းရောင်းတာလဲ..မှန်မှာပဲ...ကေအိုင်အေ ဆက်ကြေးကောက်တာလဲမှန်မှာပဲ....မဆီမဆိုင်ဆဲဆိုနေကြတာတော.နားမလည်နိုင်ဘူး....
KIAalam nchye ai gaw myan shazai nielachyum nnga ai nbung hkum gawut mu yup ma nu!!!"""""!"!
ဟာဘယ်ဖြစ်မှားလဲ၊အခုလိုမတရားရှာလို့ရတဲ့ငွေရှိနေလို့ဆရာတော်တွေတိုက်နဲ့ကားနဲ့နေနိူင်တာပေါ၊ အခုလို့သေနတ်ပြချန်ချောက်ပီရတဲ့ငွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းတို့ရဖ်ကွက်အိမ်တွေမှားဆုတောင်းပွဲတို့ စာသောက်ပွဲတို့များများ လုပ်နိူင်ထာပေါ့။ဆုတောင်းစာသောက်ပွဲမရှိရင်တို့ကချင်တွေငတ်ကုန်မှားလေ။တို့သင်အုပ်ဆရာတွေလဲအခုလိုမတရားတဲ့ငွေရနေလီု့ဇိမ်နဲ့နေနိူင်တာပေါ့။ဒါကြောင်မို့kia ဘရန်ရောင်ဖမ်းမိတာနေတာလွှတ်ပေးဖို့ထိပ်ဆုံးကနေဆန္ဒပြပေးရတာပေါ့
yup ma yu sai. yawng sim nu.
အခွန်(ဆတ်ကြေး)က ရိုမီ မပြောနဲ့ KIA ကို ဦးတေဇ တောင်ပေးဆောင်ရတာဘဲ။အလှူငွေနဲ့အခွန်ကမတူဘူးလေ။အလှူငွေကမထည့်ခြင်လဲနေလို့ရတယ်။အခွန်ထမ်းဆောင်ရမှာ ကပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဘဲ။ ရိုမီသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
မှန်ကန်တဲ့လူဟာကိုယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုငြင်းခုံခြင်း ခြိမ်းချောက်ခြင်း တွေနဲ့ ပြလေ့မရှိကြဘူး ။
ရိုမီး ဘိန်းရောင်းသလို သူ့မိန်းမအမျိုးဂျင်ဒီးလည်မိုးကုတ်မှာဘိန်းရောင်တာဘဲ
မင်းတို့သိပ်တော်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြောသလိုကချင်နိူင်ငံဖြစ်ပီပေါ မင်းတို့ကသေနတ်ကိုင်ထားပီပြည်သူတွေကိုခြိမ်းချောက်လုပ်စားနေတာကို ဟုတ်လှပီလို့ထင်နေတာလားသတ္တိရှိရင် Traning ရှိရင်ဗမာအစိုးရကိုနိူင်ရမှာလေ၊ဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့လူတွေကြားမှားခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဗုံးခွဲတာတို့ပြည်သူတွေသွားနေတဲ့လမ်းတံတားတို့ခိုကြောင်ခိုးဝှက်ဗုံးခွဲတာကိုသတ္တိရှိတာလားKiaရေ ဘုရားသခင်ကချှင်တွေကိုယင်ကျေးသောစိတ်သွင်းပေးတ်ေမူပါ
ကချင် kia အမျိုးတွေလဲမူးယစ်ဆေးအကြီးကျယ်ရောင်းတာကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ထဲ့မပြောတာလဲ
၊ဒါဆို kia ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှားမူးယစ်ဆေဝါးပေါ်နေတာဘယ်သူတွေလားရောင်းနေလို့လဲ၊ကချင်ကကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်နော်၊
all pan char stfu
လေးမိုင်ပဲပိုင်တဲ့ ဗမာစိုးရ ယခုမြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်အောင် တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ထားတာ ငါတို့အဖိုးတွေကွ ကျေးဇူးတင်တတ်စမ်းပါ
ငခုန်းမ တကောင်ကြေင့် တလှေလုံး ပုပ် တယ် ဆိုတာ သိတယ်မဟုတ်လား
Panshabi hte win myit datbung seng yan kani hpyaw hpe law law shabya ya ai shara re ai lam moi shawng kaw na kani hpyaw la n,na Hpakant de sa dut dut re ai jan nan ngai hpe tsun ga sai re chye da ni ai yaw kachin niehkum yup pyaw nga mu law.
ပန်ချာ ရိုမီ ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့...ရိုမီ...မိန်းမ အမျိုးတွေနဲ့ ဘာတစ်ခုမှမသက်ဆိုင်ဘူး...သူ့အမျိုးတွေက ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် လုပ်စားကြတာ...လူကောင်း တွေပါ...မိုးကုတ် မှာအားလုံး သိကြပါတယ်..
Hkau nienmai zim ai lo. ZIM taw nga yang nmai. Ga rau mung gasat ra ai. Ta tut ma galaw gwi ra ai. Jinghpaw ni hpe roi ai ga tsun ai ni. Dip Lu dipsha galaw taw ai ni yawng hpe htau kau ra ai.
ပန်ချာတွေလို့မသုံးပါနဲ့သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက် ကိုဘဲပြောပါ
နယူးဒေလီနဲဘုံဘေကိုကချင်တပ်ကထိန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းရှိခဲ့တာပန်ချာစစ်တိုက်သော်မသော်သက် သေပြနေပြီးသာပါဟဲဟဲသနား တယ်နော်
Enough is enough, we all are friends,THE ONE who offends the laws of GOVERNMENT and KIO WILL HAVE TO PAY for what HE or SHE had done. KACHIN GENT.
မင်းကစာပဲတတ်တာ ပညာမှမတတ်တာ၊ ဟိုတစ်ယောက် လည်း မရိုင်းစိုင်းပါနဲ့ မင်းခံပြီးလို့ အလှည့်တောင်း နေသလား..
ပန်ချာ့ အဖေ ပန်ကာ said...
ပန်ချာဆိုတာ ကချင်နယ် မပြောနဲ့ မြစ်ကြီးနားမှာ လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်
ပန်ချာတွေကိုယ်တိုင် သိပါလိမ့်မယ် ဧည့်နိုင်ငံသားပါ ကချင်ကို မှိုချိုး မြစ်ချိုးပြော တာ မတရား ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် တော့ ကချင်က ချက်ချင်း မဟုတ် တဖြည်းဖြည်းချင်း မသိမသာ သိတယ်နော် မြို့နားတ၀ိုက်က သိပ်ခွာပြီး လည်တာသိပ်မတွေ့ဖူးတဲ့ ထဲ ပန်ချာထိပ်ဆုံး မြို့ထဲအောင်းတော့ အပြင်အကြောင်း နားမလည် ကိုယ် တိုင်လက်ချိုးရေနိုင်တဲ့ အရေတွက်မှန်းလည်းမသိ နွားချီးပုံက လောက်လို ဖြစ်နေတယ် ဆက်ကြေး အကြောင်း မသိ ဘာမသိ ရဲကျတော့ ပေးတတ် ကြောက်တတ်တယ
နှိင်ငံကြီးသားတွေကမရှိင်းတတ်ပါဘူး ဟိုတစ်ယောက်သူခံဘူးလို့ နေမှာပါ သမိုင်းအမှန်ကိုမသိတာသူတို့ အပစ် မဟုတ်ပါဘူး စစ်အစီုးရကမှတောက် သုံးမကျတာ သနား လိုက်ဒါ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစိပါယ်တောင်နားမလည် တဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အနာဂတ်သနားစရာပါမတွေးရဲစရာပါဘဲဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးမရှိင်း ပါ နဲ့ကွာ
ဆွေးနွေးပါစေ၊ kio/a အကြောင်းများများ ဆွေးနွေးနိုင်ပါစေ၊ သူတို့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်၊ လက်ခံသင့်လား/ လက်မခံသင့်ဘူးလားပေါ့၊ ကချင်ပြည်ရဲ့ အရှင်သခင်ဟာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလာသည် အထိပေါ့။
the Panchapi should apologize publicly to all Kachin populace for what ther are doing in Kachin state.
လီးပဲကွာ ဘယ်ကောင်မှမရေးနဲ့တော့ ဖတ်ရတာစောက်
ရမ်းခေါင်းမူးတယ် လီးပဲ ဘာကောင်တွေလဲမသိဘူး
အကုန်ဗျင်လိုက်မယ် လီးဖြစ်လားသူ့ဘတူ ရောင်းရောင်း
မရောင်းရောင်း စောက်ရူးတွေ လီးပဲ
you don't even fucking care about your family, your surrounding and worst of all yourself. maybe you are one of those drag addict junkie who can't get out from the circle of misery..
all you can say is လီးပဲကွာ .. nothing else..
ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုခြင်းဖြင့် သင်ဧ။်တန်ဖိုးကို ပြသပါ။
fuck. U. Prophet.
မင်းတို့အားလုံးတော်ကြတော့. ကေအိုင်အေနဲ့ပန်ချာရိုမီတို့ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေသွားကြပြီ. အချင်းချင်းဝိုင်းမကိုက်နဲ့တော့. စေတနာမေတ္တာဖြင့် မြို့ပေါ်က. ကိုကိုမော်တော်ဘုတ်(ခ)ကိုပန်ချာ
I like the motto, that is "war is not the answer". it is absolutely true. if you want peace, you have to negotiate first. try to beapeace-maker. the world will beabeautiful place to live.
DRUG LORD of the KACHIN STATE, ROMY, TRUTH cannot be kept for along time,it hasatime limit under the control 0f LORD ALMIGHTY asalot of drug addicts and their families have been troubled financially as well as health problems by the drugs YOU are selling to them. UNCLE THEIN.
ယုတ်မာတဲ့သူတွေကြတော့ကောင်းတာစားတယ် ကောင်းတာဝတ်တယ် ကောင်းတာစားတိုင်းမယုတ်ပါဘူး စားဘူးပဲ စားဘူးပဲ
Lee lar ,myen sawa ni è.
ပန်ချာရဲ့အဖေ ပန်ဒါ said...
ပန်ချာတွေတော်တော်များများဘိန်းအရောင်းဝယ်လုတ်ကြတာဘဲ။ဘာဖြစ်လို့ ရိုမီ နောက်ကိုလက်ဆေးပြီးလိုက်နေတာလဲ။တော်ကြတော့။
သန်းလင် မဟုတ်ဘူး သန်းလွင် သူတို့မန်နေဂျာ
ညီညီ က ခေမာသီမိမှာနေတာ ပန်သေးဝင်းအောင်
ဆပ်ကြေးတောင်းတယ် ဆိုရင်တောင်ထည့်သင့်တယ်။ တစ်သက်လုံး ကချင်တွေကို စစ်တပ်၊ရဲ နဲ့ ပေါင်းပြီး ဂုတ်သွေးစုပ်တာ။
Jade Land said...
I kachin love you all whether you are puncha or muslim or bamar or shan because you are human like me. But do respect KIA/KIO's political movement. One day the whole burma will peacefully be governed by kachins along with all who have real love. JL
It's. Called necessary war. You can't fight Burmese junta with nonviolence means. What happened to Suu Kyi? She is dancing how the fucking junta want now. She doesn't oppose whatever the junta is doing now though she's the opposition leader. Nonviolence means is not always and only means for democratic political reform and freedom from oppression. Even Aung San father of Sui Kyi fought British cunninly allied with Japanese with arms. Longlive KIA/KIO. if the KIA leaders are tired of fighting then the new generation will fight with sophisticated weapons and technology to attain freedom from the Burmese junta and supporters of it.
သန်လွင် နဲ့ညီညီက အခုကန်ပိုက်တီးလမ်းမှားလှုပ်းရှားနေတယ်ဆိုတော့တစ်နေ့တော့တွေမှားဘာ ခင် ဗျာတို့ဘိန်းသယ်ကကားတွေသတိထားပါနော်
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မင်းရဲ့ (*)''''' ဟဲဟဲ
ဖြန့်ကျက် တွေးး ပါ။နွား ခြေ ရာ ခွက် လောက် မ တွေး နဲ့။
ပန်ချာဆိုတာ ညကျရင် နာရီစင်နားက ကုလားမုန့်ဆိုင်မှာ မုတ်ဆိတ်ဘလပွ ပေါင်းထုတ်နဲ့ လူရိုးအဖွဲ့တွေကို ပြောတာလား
မေလိုးကချင်တွေ မင်းတို့ဖင်ခံဖူးလို့ ငါတို့ကိုနံတယ်ပြောတာလား
ကချင်မတွေ ဖာသယ်ဖြစ် ၊ကချင်ကောင်တွေ ဖာကောင်းဖြစ်
မေလိုးကချင်တွေ သူပုန်က သူပုန်ပဲကွ
စပ်ကြေးကောက်ချင်တာ ကောင်းတယ် အချေ။အမြစ်မရှိတဲ့ ဒီဝက်ဆိုဒ် ကို ကြည့်ထား ငါ တစ်လ ထဲနဲ့ ဟက်ပြမယ်
heu stop it now.
ALL the SIKHS in KACHIN STATES must compromise right now with the KIO and should be friendly with ALL the KACHINS.Donot be foolish to oppose the KIO and KIA as well as the NATIVE KACHIN PEOPLES because YOU must understand that KIO,KIA have been fighting the government force for over 50 years,and this fighting will go on until THEY achieve their GOAL. SO if YOU want to live and doing business in KACHIN STATE,my friends SIKHS, please BE CLEVER.
It's Shane sweet shop. Owner is zaw lay.
ကတုံးရိတ် = ၁၀၀၀
ပန်ချာတွေအားလုံးအတူတူဘဲဒီကောင်တွေစီတာပူခဏခဏလာတယ်၊နောက်လုံးဝမလားဘာနဲ့။ ပီမှနောင်တမရဘာနဲ့ ဒါဘဲ
မေလိုးကချင်တွေ သူပုန်က သူပုန်ပဲကွ)............................
ဒီ comment ရေးတဲ့လူ သိပ်ရိုင်းတာပဲ.. မင်းက ဘာလူမျိုးပါလိမ့်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်သိအောင်လုပ်.. သူများကို မစော်ကားနဲ့...... မင်းက မင်းအဖေရဲ့နာမည်ကော သိသလားလို့မေးချင်တယ်.. ဆိုလိုတာက ဖာသည်မ နဲ့ Unknown ယောက်ျား ခိုးစားရင်းနဲ့ ထွက်လာတဲ့ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေးလားလို့ပါ။ ဒါမ မဟုတ် ပန်ချာတွေဘက်က ကာပါ လုပ်ရအောင် သူတို့မွေးထားတဲ့ ခွေးမက မွေးတာပဲဖြစ်မယ် မှန်တယ်မလား..ဟုတ်.. ခန့်မှန်းတော်လိုက်တဲ့ ငါ ပါလားနော်....... သူပုန်က သူုပုန်ပါပဲတဲ့... .......သူပုန်ဆိုတာ အစိုးရမဖြစ်သေးခင် တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းက ခေါ်တာပါဆိုနေမှကွာ........ သဘောကိုမပေါက်ဘူး.. .... (စပ်ကြေး) ဒါ မင်း ရေးတာနော်.. (Taxs = အခွန်) ကောက်တယ်လို့ပြောစမ်းပါ.. အခွန်ထည့်ရမှာပဲ..အခုတောင် မင်းရဲ့သခင် ပန်ချာတွေ အခွန်ထည့်ပြီးသွားလောက်ပြီ.. မင်းမသိလိုက်ဘူးမဟုတ်လား.. မင်းလည်းထည့်ရမှာပဲ..လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ပေါ့....ပန်ချာတွေမှာ ကျွန်ခံ ယောင်ချာချာနေသရွေ့တော့ အခွန်ဆောင်ဖို့ မလိုသေးဘူးပေါ့ကွာ... ........ပြောသေးတယ် (အချေ။အမြစ်မရှိတဲ့ ဒီဝက်ဆိုဒ် ကို ကြည့်ထား ငါ တစ်လ ထဲနဲ့ ဟက်ပြမယ်.... ) တဲ့... ဟက်ချင်ဟက် ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး.. ငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး .... ကျွမ်းကျင်ရင်တစ်လမလိုဘူး...... ဘယ်နေ့ကနေတွက်လို့ တစ်လ အတွင်းလဲ..... နင့်ကြီးတော်/ ပန်ချာနဲ့ အပေါင်းအပါကို အရင်ဟက်အုံး.. ပြီးရင် မင်းအဖေ (Unknown) ကိုတွေ့အောင်ရှာ.. ကြားလား အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေး.........အဲဒါမှ သဘောမပေါက်သေးရင် ကျွန်စိတ်ဓါတ်ပဲ..
မြို့ပေါ်က ဘော့စ် said...
ငါတို့ပန်ချာဘီကို မော်တော်ဘုတ်လို့ မခေါ်ပါနဲ့။ငါတို့ကမော်တော်ဘုတ်(ခေါ်)ခေါင်းပေါင်းကိုအမြတ်တနိူးထားတာ။ဘယ်လောက်အမြတ်တနိူးထားလဲဆိုရင်သေသွားရင်တောင်ဒီမော်တော်ဘုတ်ကိုစီးပြီးတမလွန်ကိုသွားတာ။နောက်တခါဘယ်တော့မှမော်တော်ဘုတ်လို့မခေါ်မိပါစေနဲ့။မအေလိုးကချင်တွေ ငါလိုးမသား။
hey stop now. it will not end if u r going on like this
it does not seem to end. it will just cause disunity among the inhabitance in the state. it isatime to we need to get united more than ever.we share the same fate whether kachin or panchar.
ပန်ချာ၊ တရုတ်၊ လရှီ (စတုန်) တွေဟာ မြစ်ကြီးနားမှာ မူယစ်ဆေးဝါး ရောင်းသူ အကြီးစားတွေပါ။ သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ စစစ၊ စီအိုင်ဒီ၊ အက်စ်ဘီ နှင့် ကူညီပါရစေ တွေဟာ နောက်ကနေ အကြံပေး ကူညီနေ တာပါ။
Shane shop business is only sweet. How can they buy Parado and Landcruiser motorcar? Let's find out what is site business?
blogspot can't be hacked..
try hacking until you die if you know how
you fucking stupid idiot...
ROMI I? ROMY I? Nau galu mat sai ,kara hte ngup mun lawan sa rep kau nu, yu yak wa sai le.
ROOMY WILL NOT PROSPARE FOR LONG, THEY WILL IN TURN HAVE TO PAY FOR WHAT THEY HAVE BEEN DOING UNTILL NOW. THEY ARE NOT SEEKING HONESTLY FOR THEIR WEALTH, THE MORE THEY WILL LOOSE THE MORE THEY EARN.
Romi,Romy, Romee/How do you spell your name? Are youastar? an actor?adirector?avocalist? Ah, I now see you'reaillegitimate business man and alsoabank for Burmese polices.They need some money, they will come to you in every month.Isn't it? You are so popular in this website.There are many comments about your bad news.And I want to ask you, How many kyats did you have to pay to begged Burmese polices foramonth? Tell me ,please. I will keep your answer asasecret.But I just wanna warn you 'Don't be so proud that you have money .You will die soon because of your illegitimate, bad, useless and ignominious business'. Wait and see.
မှုယစ်အဖွဲ့ တွေဘာလုပ် နေသလဲ။ လစဉ်ငွေလိုက်ကောက် နေတာလား၊ တိုင်းက အထူးအဖွဲ့ရောဘာလုပ်နေတာလဲ၊
မှုးယစ်ဆေးဝါရောင်ဝယ်ဖေက်ကား သူတွေရဲ့ အမည်နှင့် နေရာကိုဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတာဝန်ယူပြီးဖမ်းမှာလဲ။
မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဆက်သွယ်ရေးရုံး သမားတွေ ဖုန်း tracking လုပ်ဆောင်မှုများနေ။
လုပ်ရမည့်အလုပ် မလုပ်ဘဲ မှုးယစ်ရောင်းဝယ်သူများ၏ ကျွှန်(လုပ်သား) ဖြစ်နေ။
မှုယစ်ဆေးဝါရောင်ဝယ်ဖောက်ကားမှု ဘယ်သူတာဝန်ယူဖြေရှင်းမလဲ။ ဖြေရှင်းနိုင်သူဆက်သွယ်ပါ။
စစစ၊အက်စ်ဘီ၊စီအိုင်ဒီ နှင့် ကူညီပါရစေ အပါအ၀င် ရျွေလီ၊ ရင်ကျန်း၊ လွယ်ဂျယ်၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ တောင်ကြီး၊ မနလေး ၊ ရန်ကုန် နှင့် နေပြည်တော် တို့မှာ မှုယစ်ဆေးဝါး လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး နှင့် ထိုဒေသမှ လူ များပါဝင်နေ။
တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများနှင့်လူအများသိရှိစေရန် ပန်ချာရူမီရဲ့၎ ၊၅နှစ်အတွင်းဝယ်ရူထားသောအိမ်များ ကိုမကျာမီဖော်ပြပေးမည်။coomentရေးသောမိတ်ဆွေများပန်ချာဘီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဝယ်ယူထားသောအိမ်များကိုသိရှိပါကဖေါ်ပြပါရန်။
ပန်ချာ နှင့်အတူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်ဖော်ပြပေးမည်။
၁၊ ဘယ်လက်မောင်းတွင် ကြယ်တစ်ပွင့်နှင့် ပန်းတစ်ပွင့် ကိုဆေးမှင်ကြောင်ထိုးထားသူများ ကိုသတိထားစစ်ဆေးရမည်။
၂၊ မှုယစ်ဆေးဝါးများကို အစိုးရလူကြီးမင်း၏နေအိမ်တွင်၎င်း၊ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်း(လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်၊ အဏာသုံးပြီး) ယူပြီးထားရှိ။
တာဝန်သိပြည်သူမှ google map နှင့်ဆက်လက်ဖော်ပြမည်။
၃။ အမည်နှင့် တကွ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် google location များ ကို သိရှိလိုပါက Jinghpaw Kasa မှတစ်ဆင့် ၏command ရေးသူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အော်ပန်ချာဘီတွေတောင် ဒီလိုပြောလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကချင်တွေလည်း တစ်ခုခုတော့လုပ်ပြရတော့မှာပေါ့. ကချင်ပြည်နယ်မှာနေပြီး ကချင်ကိုစော်ကား၊ ဒါဆိုပန်ချာက ကိုယ်မွေးထားတဲ့ခွေးကိုယ့်ကိုပြန်ကိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတော့၊ ပန်ချာဆိုတာခွေးမျိုးပဲပေါ့. ဟုတ်တယ်နော၊ မှန်တယ်ထင်ရင် ပန်ချာနိုင်ငံကို ပြန်သွားကြပါ။ မှားတယ်ထင်ရင် ကချင်ပြည်နယ် လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကချင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဗမာဆီက အရယူရအောင်။ ဒီအတိုင်းပဲ နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုးမဆိုနဲ့နော........... ကချင်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်မင်းတို့ ပန်ချာတွေအသိဆုံးပါ......ဘူးဆိုဖရုံမသီးဘူးနော. ဒီတစ်ခေါက်က ၂ ယောက်ပဲလာတာနော. နောက်တစ်ခေါက်ဆို အိမ်ပါလာသိမ်းလိုက်တော့မယ်......ဒါပဲ...........
၄၊ ၀ါရှောင်၊ အောင်မြေ ၁၊၂ တို့တွင် မှုးယစ်ဆေးဝါးဂိုဒေါင်များရှိ၊ အစိုးရ၀န် ထမ်း(အထူးသဖြင့်ပြည်သူ့ရဲအရာရှိ)များ မှ ၀ိုင်းမော် မှမြစ်ကြီးနားသို့ carry လုပ်ပေးနေ။